Filimyada muhiimka ah ee caadiga ah ee ay tahay inaadan dhaafin | Ragga Stylish
Haddii aad isku tixgeliso inaad tahay filim filim ah, waxaa jira filimaan qadiimi ah oo ay tahay inaad ogaato. Haddii ay ku weydiistaan ​​mid ka mid ah kuwa ka muuqda liistada soo socota oo aad saarto wejiga turubka, waxaad u muuqan doontaa mid aad u xun.
hay cinwaanada qaar yaan la seegin, ee dib u eegista waajibka ah.
1 Ben Xuur
2 Fiction saxarka
3 Waqtiyada casriga ah
4 Mishiinka guud
5 A orangework saacad
6 tagtay iyadoo dabayshu socoto
7 daab orodyahanka
Waxaa la sii daayay 1959 waxaana jilaya Charlton Heston oo aan dhiman, waa filimka epic par heer sare. Sanadkii 2016 dib ayaa loo soo saaray taas oo ah waqti lumis dhab ah.
Mid ka mid ah filimada caadiga ah ee xilliyada casriga ah, (waxaa la sii daayay 1994). Waxaa haga Quentin Tarantino oo aan ixtiraam laheyn, oo leh mid ka mid ah qoraalladii ugu asalka badnaa taariikhda shineemooyinka.
Waqtiyada casriga ah
Looma waayi karo liistada leh filimada caadiga ah, cinwaan Charles Chaplin. Waqtigiisa ka hor, jilaaga Ingriiska iyo agaasimaha wuxuu soosaaray 1936, kahortaga horumarka ilbaxnimada reer galbeedka.
Casrigii Charles Chaplin, the saameynta Buster Keaton (agaasime ka mid ah buuggan casriga ah) ee ku jira shineemoorada guud waa mid aan su'aal la gelin karin. Kani, oo loo arko inuu yahay mid kamid ah filimada ugu wanaagsan taariikhda, waxaa lasii daayay sanadkii 1927.
Waxaa jira dhowr filim oo Stanley Kubrick ah oo ay tahay inaad ogaato. Waxaa la sii daayay 1971, tan waxaa loogu talagalay kuwa ugu caansan taariikhda filimada ee agaasimaha New York.
tagtay iyadoo dabayshu socoto
Kuwo badan baa ka hadlaya cajaladdan, in kasta oo aanu qof walbaaba arag. Laga soo bilaabo 1940, waa laga yaabaa inay tahay "tii ugu caansanayd" ee filimada caadiga ah.
Qaar badan oo ka mid ah filimada sheekooyinka sayniska ayaa la sii daayay wixii ka dambeeyay 1982, waxay leeyihiin xoogaa saameyn ah oo ka timaada Ridley Scott classic. Waa inaadan arkin qeybta labaad ee hadda lasii daayay haddii aadan aqoon tan.
Filim saamayn badan oo dambe ku yeeshay. Anabelle waa filim cabsi badan leh. In badan oo ka mid ah duubista cajaladaha loo yaqaan 'diabolical dolls' ayaa laga soo qaatay cajaladdii ay Linda Blair ku jileysay 1973.
Ilaha sawirka: Pelicultista /
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Filimadii caadiga ahaa ee ay ahayd inaad ogaato
Dalxiiska dalxiiska ugufiican